Karelia मा र्याफ्टिङ - एक र "पानी मा पैदल यात्रा" साहसिक को पूर्ण यात्रा। यो छोटो सप्ताह पर्यटन र बहु-दिन यात्रा हुन सक्छ। मिश्र धातु प्रकार पनि भिन्न छन्। यो सेतो पानी राफ्टिंग, एक catamaran वा कायाक मा पानी मार्फत पैदल यात्रा, र यो पर्यटकहरु यस्तो घर बनाएको rafts रूपमा, आफ्नै बनाउने विभिन्न माध्यम प्रयोग हुन्छ। यी पर्यटन भाग लिन सक्छ? यस्तो सेतो पानी राफ्टिंग रूपमा संक्षिप्त मिश्र लगभग सबैलाई उपलब्ध छ, र लामो यात्राको कठिनाइ र रमाउने अवरोध नडराऊ गर्न accustomed छन् जो सक्रिय मान्छे जस्तै। सुविधाहरू यस्तो निर्देशित पर्यटन, सूचना र सबै भन्दा राम्रो मार्गहरू, हामी तल प्रदान गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
Karelia, राफ्टिंग। सुविधाहरू
मार्गहरू अधिकांश भाग गर्न पानी पदयात्रा को, हरेक शहर निवासी सामान्य हुन सक्छ। तपाईं विशेष प्रशिक्षण आवश्यक छैन। तर, पाठ्यक्रम, तपाईंले केही सुरक्षा नियम पालना गर्नुपर्छ। साथै, हामी केही कठिनाइ र बेचैनी सहन तयार हुनुपर्छ। यस्तो अभियान समयमा Roost आगो तयार, क्षेत्र, पाल र सुत्ने बैग मा सामान्यतया छन्। केही मार्गहरू मा हुनत शिविरमा साइटहरु जहाँ तपाईं एक तातो खाना र नुहाउनु खान सक्नुहुन्छ छन्। सो बैग, पाल र अन्य डेरा डाले सामान आफ्नै लाग्न सक्छ, र तपाईंले यी कुराहरू छैन भने, तपाईंले यो सबै राम्रो किराया दिनुहोस्। यस्तो यात्राको को लागत मा समावेश एक दिन तीन भोजन। भ्रमण संचालक यात्री पठाइएका छन् जो मिश्र, बस नदी मा मिश्र धातु भाग छैन, प्रशिक्षकहरु अनुभव संगठित। Karelia यस्तो अभियान को जटिलता चाहने लागि विभिन्न विकल्प प्रदान गर्न सक्छन्। मार्गहरू केही एकदम बच्चाहरु को लागि सम्भाव्य छन्, तर त्यहाँ चरम र अनुभवी छत मात्र लिन जो ती पनि छन्। पहिले प्रत्येक यात्रा प्रशिक्षकहरु व्यवस्थापन rafts, kayaks वा अन्य साधन विशेष छोटो पाठ्यक्रम पकड।
र्याफ्टिङ (Karelia) विभिन्न लम्बाइ र जटिलता को हो। उदाहरणका लागि, एक लोकप्रिय दिन rafts पैदल यात्रा। तिनीहरूले दुई तीन घण्टा पछिल्लो। अक्सर तिनीहरू अभ्यास गर्दै Shuya नदी। सबै भन्दा लोकप्रिय मार्गहरू - तीन दिन। शुरुआती सामान्यतया नदी गहिरो र थ्रेसहोल्ड हटाउन सजिलो छ देखि, Shuya मा पैदल यात्रा रुचाउँछु। यद्यपि, यो भ्रमण गरेर, तपाईं Karelia सबै क्लासिक सौन्दर्य देख्ने। र सबैभन्दा लामो मार्गहरू 11-12 दिनको लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। समय र हटाउन सुन्दर ताल, जंगली नदी हेर्न (जस्तै, 60 किलोमिटर को "झाडू" वा Piste मा 110 Vonge) र त्यसपछि सेतो समुद्र मा एक पौडनु लागि जाने प्रयास पछुताउनु नगर्ने ती त्यहाँ जाने। बाटोमा नियम, धेरै रेपिड। तिनीहरूले जटिल, तर एकदम हानिरहित छन्। त्यहाँ क्यासकेडिङशैलीपाना थ्रेसहोल्ड संयुक्त, लामो, हो, र तिनीहरूले ध्यान दिएर उपचार गर्नुपर्छ। छोटो र लामो hikes साथै, र धेरै अन्य मार्गहरू छन्। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को रोचक, हामी तल वर्णन गर्नेछ। सामान्यतया तिनीहरूले पर्यटकहरु मात्र एड्रेनालाईन को "घूंट" मौका छ भनेर योजना छन्, तर पनि लगभग मानिस, बलौटे समुद्री तट, माछा मार्ने को reeds बीच द्वारा Untouched सुन्दर मा आराम, को ताल र अन्य सुन्दर परिदृश्य पराउँछु र पनि पाइन वन केही जामुन र मशरूम अप भेला हुन्छन्।
Karelia नदीहरू मा र्याफ्टिङ व्यवस्थित गर्न सबै भन्दा राम्रो समय
यी ठाउँहरू लेट वसन्त पानी यात्राको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हो। बरफ पिघलने गर्दा सानो करेलियन नदी अचानक अप्रिल को अन्त मा विशाल बग्नेछन् परिणत। तिनीहरूलाई यात्रा पनि छैन मात्र सुखद, तर सुरक्षित छ। तसर्थ, Karelia मा नदी राफ्टिंग व्यवस्थित गर्न सबै भन्दा राम्रो महिना - मई। र एक बारबेक्यू संग किनारा पिकनिक मा दाँत मा भेला भन्दा सत्य, छैन यो राम्रो एक रापट, को भरिएको र रेपिड मा कायाक वा catamaran मा सवारी छ, सबै उच्च पानी तपाईं त effortlessly गर्न मौकाको भन्ने थप? र अनुभवी hikers र novices यस्तो मौका सम्झना छैन: प्रयास गर्नुहोस्। कुनै आश्चर्य मे बिदा - शान्त Shua Uksu धूर्त वा हिंसात्मक Tohma कहिले भीड उछिन्ने Karelia प्रशंसक नदीहरू मा मिश्र धातु एक समय। तपाईंले यो यात्रा दुई वा तीन दिन सीमित गर्न सक्नुहुन्छ, र गर्न सक्छन् र मई को पहिलो आधा सम्पूर्ण यसलाई सुत्छन्। यसलाई के मतलब र तपाईं समय मा निर्भर गर्दछ। तथापि, मे मिश्र धातु ध्यान र हेरविचार आवश्यक छ। पानी हिंसात्मक कायाक वा रापट, र यो समयमा, कम तापमान बारी सक्छ। त्यसैले यो एक wetsuit, स्प्लास प्रमाण ज्याकेट र पाइन्ट र न्यानो सुत्ने झोला ल्याउन राम्रो छ।
यो यात्रा अक्सर एक चरम भ्रमण हो। तसर्थ, त्यहाँ केवल वयस्क पर्यटकहरु भन्दा कम्तिमा 16 वर्ष पुरानो लिन। यसलाई जहाँ तपाईं एड्रेनालाईन को एक अतिरिक्त प्राप्त नदी छ। र्याफ्टिङ Uksa (Karelia) मात्र लेट वसन्त र प्रारम्भिक गर्मी मा उपलब्ध छ। तथ्यलाई गर्मी को शुरू संग पानी स्तर जोडले खस्छ भनेर र यात्रा असम्भव बन्नेछ। मार्ग लम्बाइ बारेमा चालीस किलोमिटर छ। अक्सर, समूह नदी मार्फत पुल देखि पठाए। पुल, भर्याङ, Kolokoski, तश्तरी, सामन, गुलाबी हात्ती, मिल र अरूलाई - बाटो मा पर्यटकहरु धेरै ठाडो रेपिड छन्। अर्डर प्राप्त गर्न यी मनोरम भीर पानी सबै दुई वा तीन दिन हुनुपर्छ। शिविरमा "तीन तत्व" गर्न पदयात्रा समाप्त हुन्छ।
यो नदी newcomers जस्तै छैन। त्यो अनुभव hikers रुचि। मुख्य रूप Kutsayoki नदी र Tumcha - र्याफ्टिङ Reds (Karelia) अक्सर अन्य पानी प्रवाह लागि यात्रा संग संयुक्त छ। यी भ्रमणहरू अक्सर गर्मी मा ठाउँ लिन। कायाकिङ - कम्तिमा catamaran द्वारा नदी विजयी। यो पदयात्रा एक कठोर उत्तरी सौन्दर्य प्रदान गर्दछ। तपाईं विजेता तत्व चर्किरहेको, Reds को भरिएको गर्न शक्तिशाली झरने र दुर्गम भीर र यात्रा हेर्न तपाईं वास्तविक नायक महसुस बनाउन हुनेछ। त्यहाँ 5th ग्रेड को क्षेत्रहरु छन्। विशेष रोचक रेपिड रकी, द्वीप, प्रार्य गठन जानुहोस्। कुनै आश्चर्य को Reds अक्सर Altai Bashkaus तुलना गरिन्छ। यो मिश्र धातु पर्यटकहरु समयमा भ्रमण निलो पोखरी Pyhäjärvi। पदयात्रा एक हप्ता वा बढी रहन्छ, र Karelia Ivovskom जलाशय मा एक सुन्दर मार्गमा समाप्त हुन्छ।
यो नदी एकदम सानो पानी छ। यसको लम्बाइ - 55 किलोमिटर। Sig (Karelia) र्याफ्टिङ खेल साधारण अभ्यास छैन। तर त्यहाँ राम्रो माछा मार्ने छ। स्थानहरू यस नदी बग्छ जो, malozaseleny। त्यो हालै मात्र पर्यटकहरु र मिश्र धातु प्रेमीहरूलाई को ध्यान आकर्षित गर्न थाले। यहाँ रेपिड जटिल छन्, तर ताल किनारमा र धेरै सुरम्य। पर्यटकहरु यो त बाढी आउँछ थियो, मे र जुन मा यस नदी मा राफ्टिंग सुझाव दिन्छौं। सेतो सागर मा व्हाइटफिश। तर एक कायाक मा जान मात्र उच्च पानी को उपस्थिति मा हुन सक्छ। यो समुद्र कदम पूरा भन्ने तथ्यलाई। तसर्थ, थ्रेसहोल्ड धेरै अन्त सम्म छ हटाउन। हालैको एउटा फुट समुद्रलाई वास्तवमा तपाईं नेतृत्व।
पानी जस्तै एक धेरै राम्रो Karelia छ। Keret नदी, जो मा मिश्र धातु सबैभन्दा पर्यटकहरु, सबै भन्दा रोचक एक लोकप्रिय हुन मानिन्छ। यो मार्ग सामान्यतया गर्मी र शरद ऋतु मा स्थान लिन्छ। नदी नाम मतलब "पहाड शिखर" को Sami शब्द आउँछ। मार्ग को लम्बाइ - 120 किलोमिटर। यो Varlamovo ताल बाट सुरु हुन्छ। साथै मोटर संग catamarans र rafts यसलाई हटाउन, कायाकिङ रूपमा। यस यात्राको समयमा, त्यहाँ 400 मीटर देखि3कि धेरै रेपिड छन्। तर तिनीहरू शान्त पानी धेरै छ किनभने, यी सबै क्षेत्रमा मोटर द्वारा traversed छन्। यो Nameless लेक, टेढे, Varatskoe। यो भ्रमण समयमा, पर्यटक मात्र आफूलाई व्यक्त भएको थियो सक्दैन, तर पनि Karelia को जंगल को शानदार प्रकृति पराउँछु। अभियान एक नियम को रूप मा, सेतो सागर पहुँच र आफ्नो द्वीप भ्रमण समाप्त। त्यहाँ अक्सर राम्रो माछा मार्ने संगठित छ। सेतो सागर द्वीप Keret र मृग मा विशेष गरी राम्रो छुट्टी। कति समय आगंतुकों आधारमा,3अप 7-8 दिन देखि यो मिश्र धातु जारी छ।
Karelia (र्याफ्टिङ) को सबै आकर्षण जोडती जो सबैभन्दा रोचक मार्गहरू को एक, - सीमा क्षेत्र मा र्याफ्टिङ छ। त्यहाँ एक नदी Pisto, फिनल्याण्ड मा स्रोत जो छ। त्यहाँ पनि वस्तुतः कुनै सहर वा गाउँमा, र ecologically सफा क्षेत्र छ। नदीको मार्ग 85 किलोमिटर र 25-30 रेपिड बाटो मा सामना एक लम्बाइ छ। यो प्रवृत्ति अन्य यस्तै Carrel मा गाह्रो hikes छ तापनि, पानी प्रवाह मा एउटा यात्रा साथै दुवै चरम खेलाडीहरूलाई शुरुआती बनाउन। मोटर संग हाल प्रयोग rafts। यस मिश्र धातु टाढाको र दुर्गम ठाउँमा आयोजित गरिएको छ, प्रशिक्षकहरु एक उपग्रह जडान, चिकित्सा हेरविचार लागि आवश्यक साधन, र एउटा पोर्टेबल स्नान छ। को आश्वासन को सबै भन्दा सुन्दर कुनामा फोटो गोली मार। यो पदयात्रा 9-10 दिन लाग्छ।
पर्यटकहरु Karelia नदीहरू मा अनुभव को मिश्र धातु वर्णन गर्दा तिनीहरू सबै को पहिलो लामो दिन पदयात्रा पछि उत्तर, पानी को स्प्लास वा यसको तीव्र कताई, एक कैम्प वरिपरि को कठोर र रहस्यमय प्रकृति, ग्रील्ड माछा वा ताजा कान संग जंगल सम्झना। रोमान्स, को primordial प्रकृति छोएर, को bustle देखि विश्राम को बिर्सेका अर्थमा मा प्रवेश गर्न मौका - यो सबै राफ्टिंग भ्रमण गर्ने यात्री fascinates। तिनीहरूले Karelia को सुंदरियों को छाप भरिएका हुन्छन्। केही समीक्षा उत्तर र रूस को केन्द्रीय भाग पानी यात्राको तुलना गर्नुहोस्। पर्यटकहरु भनेर चयन गर्न मात्र Karelia मा मिश्र धातु मार्ग लेख्नुहोस्। SENGA नदी (एक tributary Klyazma), उदाहरणका लागि, मे बिदा समयमा पानी यात्राको लागि पनि खराब। तर यो थप सादा छ र छोटो बाँकी लागि अभिप्रेरित।
दक्षिण Ozereyevka: अतिथि समीक्षा
बस स्टेशन कीव मा "Darnitsa": कहाँ, कसरी प्राप्त गर्न
जोश मकै multivarka -, सुविधाजनक स्वादिष्ट र स्वस्थ
होटल Vita Comarruga4* (कोस्टा Dorada) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
"Profertil" महिला: समीक्षा। "Profertil" (ट्याब्लेट) पुरुषहरु को लागि: दबाइ समीक्षामा
बाल लागि भिटामिन। समीक्षा र सिफारिसहरू